प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै बदनाम
आफ्नालाई सल्लाहकार बनाएर राख्द सही सल्लाह नपाउँदाको परिणाम शीतल निवासदेखि सिंहदरवारमा बस्ने सबै बदनाम भएका छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सल्लाहकारको नाममा आफ्नालाई भर्ति गरिरहेका छन्, भर्तिकेन्द्रमा भ्रष्टाचार हुनु स्वभाविक हो । यस्तै सल्लाहकारका कारण सूचना चुहिने र लापरवाही हदैसम्म बढिरहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर नै कसैले गलत प्रयोग गरिदियो । आपत्तिजनक ट्वीटका कारण प्रधानमन्त्री विवादमा परे । सिंहदरवारले भन्यो– अनधिकृत प्रयोग भएको हो । अनिधिकृत हो भने त्यो को हो, जसले प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर नै गलत सूचना र आपत्तिजनक रुपमा प्रयोग ग¥यो । भन्नु पर्दैन ? महिनौं भइसक्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसैलाई पनि कारवाही गर्न सकेन ।
भारतीय तरकारी व्यापक रुपमा आयो र विषादीको प्रयोग व्यापक भएको प्रमाणित पनि भयो । भारतीय दूतावासको खबरदारी पत्र आएपछि सिमानामा रोकिएका भारतीय तरकारी निर्वाध नेपाल भित्रिन थालियो । यसबारे भारतले कुनै पत्र नपठाएको सार्वजनिक ग¥यो सरकारले । पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई झुक्याइयो भनेर प्रष्टिकरण दिए । प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याउने को हो ? सशक्त प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याउने साहस कुन चाहिंमा रहेछ, जानकारी दिनुपर्ने हो । ओली सरकारको ढाडमा हाड देखिएन ।
यस्तै लापरवाही राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामबाट बाढीग्रस्त इण्डोनेशियालाई पठाइएको समवेदन सन्दशको साटो बधाई सन्देश गयो । यो बेइजत राष्ट्रपतिको मात्र होइन, नेपालकै बेइजति हो । यति ठूलो लापरवाहीको साजिस कसले ग¥या, अहिलेसम्म तैं चुप मै चुप छ ।
हालै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित एउटा विज्ञप्तिमा सात दिन पछिको मिति अंकित थियो । यो प्रष्ट भयो तैपनि राष्ट्रपति कार्यालयले गल्ती स्वीकारसमेत गरेन । नेकपाको शासन यतिसम्मको जवाफदेही विहीन शासन हो ?